Vaovao - Ahoana ny fisafidianana kettle elektrika?
Kettle elektrika matetika ampiasaina amin'ny fiainantsika, anisan'izany ny ao an-trano na any amin'ny hotely. Rehefa mila rano mafana isika, dia afaka manome izay ilaintsika ny kettle elektrika, saingy misy ketrika elektrika tsy manara-penitra mety hitondra fahavoazana amintsika, koa manoloana ireo vokatra ketrika elektrika isan-karazany eny an-tsena, inona no tokony hataontsika? Ahoanaafaka mifidy ve isika tsara ketra elektrika?
JEREO NY ny fitaovana
Amin'ny ankapobeny dia jerena ny fitaovana anatiny sy ny fitaovana ivelany, ny fitaovana anatiny dia manakiana kokoa satria mifandray mivantana amin'ny rano izy io. Rehefa misafidy kettle elektrika dia tsy maintsy jerenao raha manana ny tanky anatinySUS304 marika IZA Vy tsy metaly 304, mahazaka hafanana ambony ary manana hasiana tsara hiarovana ny fahasalaman'ny olona. Ny ketrika herinaratra AOLGA dia vita amin'ny kalitao avo lentaSUS304 na SUS316 vy vy hiantohana ny fiarovana ny vokatra sy ny faharetany.
Ho fanampin'izany, ny akora ivelany amin'ny kettle elektrika dia tena manandanja ihany koa. Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny kettle elektrika eny an-tsena dia vita amin'ny plastika sy keramika azo antoka, ary tsy misy fofona hafahafa. Fa misy ihany koa ny orinasa tsirairay mba hampihenana ny fandaniana. Raha ampiasaina mandritra ny fotoana lava dia hamotsorana ireo zavatra manimba izay hanimba ny sainyNY fahasalamana.
JEREO NY ny bika aman'endriny
Rehefa mividy kettle elektrika, ankoatry ny fijerena raha mahafa-po ny endrika ivelany na tsy ampoizina dia tsy maintsy refesina amin'ny fizotran'ny famokarana koa, ao anatin'izany ny malama ny plastika ivelany amin'ny vilany herinaratra mahita na simika ny plastika sy ny vilany vy tsy misy fangarony, ary voaporofo ny sosona ivelany plastika. . Ny vokatra tsara dia azo jerena amin'ny fizotry ny famokarana. Ny ketrika herinaratra AOLGA dia avy amin'ny asa tanana henjana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, ary ny fahaiza-miasa amin'ny famokarana dia azo ankasitrahana amin'ny endrika tsotra sy atmosfera.
Misafidiana miaraka amina fiasan'ny maripana voafetra
Misafidiana herinaratra kettles miaraka amina fifehezana limiteran'ny mari-pana IZA afaka manapaka ny herinaratra avy hatrany aorian'ny nandrahoina ny rano. indrindra ny ketra elektrika eny an-tsena mampiasa fetran'ny mari-pana.
Jereo ny famaritana
Zahao tsara ny sary famantarana sy ny famaritana vokatra. Ny fenitra dia mamaritra fa ny sary famantarana ny vokatra dia tokony ho feno, ao anatin'izany ny: anaran'ny orinasa, adiresy, maodely, famaritana (toy ny fahaiza-manao), mari-pamantarana, masontsivana malefaka, masontsivana elektrika, mari-pamantarana ho an'ny natiora famatsiana herinaratra, sns. tokony hisy ny fisorohana ny fampitandremana tsy ara-dalàna, tafiditra ao ny fomba fanadiovana amin'ny antsipiriany, sns.
JEREO NY zavatra ilaina
Ny kettle elektrika dia tokony vidiana araky ny fahazarana mampiasa sy ny tena filàna. Ny fahaizan'ny kettle elektrika amin'izao fotoana izao eny an-tsena dia eo anelanelan'ny 0.6L sy 1.8L. Ny ankohonan'ny olona 2 ka hatramin'ny 3 dia afaka misafidy kettle elektrika manodidina ny 1.2L sy 1000W; 4 ka hatramin'ny 5 Afaka misafidy kettle elektrika 1.8L, 1800W ny olona.
Teo aloha: Ahoana ny fampiasana tsara ny lanjan'ny elektronika vera CW275
Manaraka: Mikasa ny hiditra ao amin'ny tokantrano homana 1 000 isa ao anatin'ny dimy taona i Beijing